जाजरकोट । झन्डै तीन साता अघिदेखि जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । भाइरल प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि गाउँबाट बिरामी शिविरमा आउन नसक्दा उपचार का...
डाक्टर केसीको भ्रष्ट्राचार बिरोधी अभियानमा अमेरिकाबाट ऐक्यबद्धता
प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको बिरुद्धमा अभिब्यक्ती दिएपछि पक्राउ परेका अभियन्ता डाक्टर गोबिन्द केसीको अभियानमा भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध बिभिन्न अभियानहरु चलाउदै आएको संस्था हेम सरिता पाठक फाउण्डेशनले पन...
“शहर कहिले सफा हुन्छ ?”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको कार्यकक्ष निलो ड्रेस लगाएका विद्यार्थीहरुको हुलले पुरै भरिएका थिए । उनीहरुको ड्रेस देख्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनीहरु नर्सिङ्गमा पढ्ने विद्यार्थीहरु ह...
काठमाडौँ । तेस्रो राष्ट्रिय योग दिवस माघ १ गतेदेखि साताव्यापी रुपमा मुलुकभर मनाइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा गठित राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले आज सरोकारवालासँगको छलफलपछि उक्त निर्णय गरेको ह...
सुन्तला खाँदा स्वास्थ्यमा ८ फार्इदा
अहिले नेपाली फलफूल बजारमा सुन्तलाले धेरै हिस्सा ओगटेको देख्न सकिन्छ। सुन्तलाको मौसम भएकाले पनि बजारभरि सुन्तला देखिनु सामान्य नै हो। चिसो मौसममा दिउँसो घाम ताप्दै सुन्तला खानुको आनन्द तपाईंहरु धेरैले ...
डा केसीको मुद्दा मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलाशमा सुनुवार्इ हुँदै
काठमाडौं । डा गोविन्द केसीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशमा सुनुवार्इ हुँदै छ। सर्वोच्चमा दुई पटक फुलकोर्ट बसेपछि मात्र इजलाश तय भएको हो । अब...
काठमाडौं । चिकित्शा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रह गर्दै आएका डा. गोविन्द केसी पुन: अनशन सुरु गरेका छन् । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तत्काल राजीनामा माग गर्दै १४ औं पटक अनशन बसेक...
भक्तपुर । विगत सात महिनादेखि आन्दोलनरत मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सले आकस्मिक कक्षमै धर्नामा बसेका छन् । केन्द्रले आफूहरुमाथि अन्याय गरेकाले न्याय पाउनु पर्ने, बिनाआधार करार सेवाबाट निष्कासन ग...
बाजुरा । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि बाजुराका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ । नेपाल सरकारले तोकेका ८० प्रकारका निःशुल्क औषधि स्थानीय तहले खरिद गर्न नसेकेका कारण स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव ...
काठमाडौं । जाडो महिनामा मानव शरीरलाई सामान्यतया अरु महिनामा भन्दा अलि बढी हेरविचार आवश्यक हुन्छ। त्यसमा पनि गर्भवती महिलालाई विशेष हेरविचार चाहिन्छ। गर्भ रहेको पहिलो तीन महिना स्वास्थ्यका हिसाबले जटि...
मौसम जाडो छ, यो समयमा कस्ता खाले फलफूल खाँदा राम्रो ? जानकारी लिनुहोस …
फलफूलका बारेमा नेपाली र भारतीय समाजमा केही भ्रमहरू छन् – फलफूल खानेवित्तिकै चिसो लाग्छ । अवश्य पनि चिसोकै कारण न्यूमोनिया लगायतका चिसोजन्य रोग लागेका बिरामी छन् भने तिनलाई चिसो फलफूललाई तातोपानीमा भिज...
लमजुङ । जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क औषधि अभाव भएको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधि अभाव भएपछि बिरामी समस्यामा परेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने ७२ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध...
स्वास्थ्य प्रति सचेत बन्दै महिला, प्रसूति सेवा लिनेको संख्यामा वृद्धि
दाङ । यहाँको अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक हजार ५६२ महिलाले राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरबाट प्रसूति सेवा लिएका हुन् । तीमध्ये ६२९ मह...
के तपार्इं जिरा पानी पिउँनु हुन्छ ? यस्ता फाईदा हुन्छ उमालेको जिरा पानी पिउँदा
काठमाडौं । हामी जिरालाई भान्सामा प्रयोग गरिने मसलाको रुपमा लिन्छौं तर यसलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो शरिरलाई फाइदा पनि गराउँछ । जिरालाई पानीमा उमालेर खान सकेको खण्डमा शरिर...
आधुनिक उपकरण जडान गरी क्षयरोगका बिरामीको उपचार शुरु
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पश्चिम जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो जिल्ला पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा आधुनिक उपकरण जडान गरी क्षयरोगका बिरामीको उपचार शुरु गरिएको छ । बिरामीमा देखिने क्षयरोगसम्बन्धी उपचार...
बाराका ४० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
कलैया । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराले जिल्लामा ४० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण रहेको बताइएको छ । यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रेमचन्द्र जयसवालले जिल्लामा ४० प्रतिशत बालबालिका कुपो...
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्यामा वृद्धि
तेह्रथुम । तेह्रथुममा स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गराउने महिलाको संख्या बढेको छ । घरमै प्रसूति हुने तथा बढी जोखिम हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति गराउने महिलाको संख्या बढेको हो । जिल्ला...
गुल्मीका छात्राहरुले भन्छन्,‘महिनावारीका कुरा गर्न लजाउँदैनौ’
गुल्मी संवाददाता १९ पुस । गुल्मीका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुले अवदेखि महिनावारीका कुरा गर्न लाज नमान्ने सपथ खाएका छन् । मासिक रुपमा हुने महिनावारीलाई सहज रुपमा लिइने समेत उनीहरुले प्रतिवद...
स्वास्थ्य शिविरमा ३५० को निःशुल्क जाँच
लहान । ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र बस्तीपुरले सिरहाको लहान नगरपालिका– १४ बस्तीपुरमा शनिबार आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ३५० भन्दाबढी बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । शिविरमा बस्तीपुर, गो...
नेपालमा पहिलो पटक क्षयरोगीको सर्वेक्षण शुरु गरिँदै
भक्तपुर । नेपालमा पहिलो पटक ‘बृहत् राष्ट्रिय क्षयरोग प्रसार सर्वेक्षण’ शुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले आगामी जनवरीदेखि शुरु गर्न लागेको सो सर्वेक्षणले देशभरका नयाँ र पुराना क्षयरोगीको ...